စက်တင်ဘာလ 23, 2018 – 2ငါးကို
စက်တင်ဘာလ 23, 2018
မူလစာမျက်နှာ / စက်တင်ဘာလ 23, 2018
ပညာသည်ပညာ 2: 12, 17- 20
2:12 ထို့ကြောင့်, ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဝိုငျးကွပါစို့, သူကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးမကျသောကွောငျ့, သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ဆန့်ကျင်, သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပဒေကြောင်းအရပြစ်မှုများနှင့်ငါတို့ကိုကဲ့ရဲ့, ငါတို့ကိုအသက်ငါတို့လမ်း၏အပြစ်များကိုထင်ရှားစေသည်.
2:17 ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ကြစို့, ထို့နောက်, သူ၏စကားမှန်လျှင်, ကျွန်တော်တို့ကိုအထံတော်သို့အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုစမ်းသပ်ရန်ကြကုန်အံ့, ပြီးတော့ကျနော်တို့ကသူ့အဘယ်သို့ဆုံးမည်ကိုသိရကြလိမ့်မည်.
2:18 သူသည်ဘုရားသခင်၏၏စစ်မှန်သောသားဖြစ်၏လျှင်များအတွက်, သူ့ကိုလက်ခံရယူနှင့်သူ၏ရန်သူတို့လက်ထံအပ်မည်.
2:19 ကျွန်တော်တို့ကိုစော်ကားမှုနှင့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နှငျ့အတူသူ့ကိုဆနျးစစျကွပါစို့, ကျနော်တို့ကသူ့ရှိခိုးငါသိ၏နှင့်သူ၏သည်းခံခြင်းကိုကြိုးစားစေခြင်းငှါ.
2:20 ကျွန်တော်တို့ကိုအများဆုံးရှက်စရာသေစေခြင်းငှါထိုသူအာ​​းအပြစ်စီရင်ကြကုန်အံ့, အဘို့, သူ့ကိုယ်ပိုင်စကားအတိုငျး, ထိုသူကိုဘုရားသခင်အဘို့အပြုစုစောင့်ရှောက်မည်။ "
ဂျိမ်း 3: 16- 4: 3
3:16 ငြူစူခြင်းနှင့်တွေ့ရာ၌, လွန်း inconstancy ရှိသမျှညံ့သညျ့အလုပျရှိပါတယ်.
3:17 သို့သော်အထက်မှသောပညာအတွင်း, မုချ, chastity ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်, လာမည့်ငြ​​ိမ်းချမ်းရေး, နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း, ပွင့်လင်း, ကောင်းသောအရာကိုမှမထားဘဲအခွင့်ပေးခြင်း, ကရုဏာတရားနှင့်ကောင်းသောအသီးတစ် plenitude, တရားအမှုကိုစီရင်သောအခါမဟုတ်, false မပါဘဲ.
4:1 သငျတို့တှငျစစ်ပွဲများနှင့်ရန်တွေ့ဘယ်အရပ်ကလာကြဘူး? ဒါကြောင့်ဒီကနေမဖြစ်: သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလိုဆန္ဒများကနေ, သင်တို့အင်္ဂါအတွင်းထားတဲ့စစ်တိုက်?
4:2 သငျသညျအလိုရှိသော, နှင့်သင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး. သငျသညျမနာလိုနှင့်သင်ကိုသတ်ပစ်, နှင့်သင်ရယူနိုင်ရင်. သငျသညျငြင်းခုန်နှင့်သင်ကိုစစ်တိုက်ခြင်း, နှင့်သင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, သငျသညျမမေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့.
4:3 သင်မေးနှင့်သင်မခံမယူကြဘူး, သငျသညျဆိုးရွားစွာမေးပါသောကြောင့်,, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒတွေကိုမျက်နှာသို့အသုံးပြုရန်စေခြင်းငှါဤမျှ.
မာကု 9: 30- 37
9:30 ထိုအခါသူသည်မိမိတပည့်မသွန်သင်, သူကထိုသူတို့အားပြောဆို, "လူသားသည်လူတို့လက်သို့အပ်ကြလိမ့်မည်, သူတို့ကသူ့ကိုသတ်လိမ့်မည်, အသေသတ်ခံ, သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထမြောက်လိမ့်မည်သူသည်နောက်တဖန်။ "
9:31 ဒါပေမယ့်သူတို့ဟာစကားလုံးနားမလည်ခဲ့ပါဘူး. ထိုသူတို့ကသူ့ကိုမေးခွန်းထုတ်ဝံ့ကွ.
9:32 ထိုသူတို့ကပေရနောင်မြို့သို့ထံသို့ ဝင်.. ထိုသူတို့သညျအိမျ၌ရှိရသောအခါ, သူကသူတို့ကိုမေးခွန်းထုတ်, "သင်သွားရာလမ်းကိုဘာဆှေးနှေးခဲ့?"
9:33 ဒါပေမဲ့သူတို့ကတိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏. ဧကန်အမှန်အဘို့, လမ်းခုလတ်မှာ, သူတို့ကြီးသူတို့ကိုအရာအဖြစ်အချင်းချင်းအငြင်းပွားခဲ့.
9:34 နှင့်ထိုင်, သူသည်တဆယ်နှစ်လုံးကိုခေါ်တော်, သူကထိုသူတို့အားပြောဆို, "မည်သူမဆိုပထမဦးဆုံးဖြစ်လိုပါက, သူအားလုံးနှင့်လူအပေါင်းတို့၏န်ကြီး၏နောက်ဆုံးဖြစ်ရကြလိမ့်မည်။ "
9:35 နှင့်ကလေးတစ်ဦးကိုယူပြီး, ထိုသူတို့၏အလယ်၌ထားပြီးမှ. ထိုမင်းသည်သူ့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးပြီးမှ, သူတို့ပြောဆို:
9:36 "အကြင်သူသည်ငါ့နာမ၌တယောက်တည်းထိုကဲ့သို့သောကလေးသူငယ်အားလက်ခံတွေ့ဆုံ, ငါ့ကိုလက်ခံ. အကြင်သူသည်ငါ့ကိုလက်ခံ, အားလက်ခံတွေ့ဆုံမဟုတ်, ငါ့ကို, ဒါပေမယ့်သူငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူ၏။ "
9:37 ယောဟန်သည်ဟုသူ့ကိုမှတုန့်ပြန်, "အရှင်ဘုရား, ကျွန်တော်တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ရဲ့နာမ၌နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်သည်ကိုမြင်; သူကျွန်တော်တို့ကိုနောက်သို့မလိုက်ပါဘူး, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကသူ့ကိုတားမြစ်လိုက်သည်။ "
စက်တင်ဘာလ 24, 2018